निजी एयरलाइन्सलाई भ्याइनभ्याई, नेपाल एयरलाइन्स भने 'घाम ताप्दै'
निजी एयरलाइन्सलाई भ्याइनभ्याई, नेपाल एयरलाइन्स भने ‘घाम ताप्दै’
प्रकाशित : 5:25 pm, बिहीबार, असोज २८, २०७८
काठमाडौं । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि दशैं बजनेसको उपयुक्त अवसर हो । निजी क्षेत्रका वायुसेवा प्रदायकलाई दशैंको व्यापार भ्याइनभ्याई भइरहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यापार भने सुस्त छ ।
अथवा भनौँ आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति मात्रै छ । किनकि निगमसँग उडानका लागि आवश्यक जहाज नहुनु तथा भएकाको पनि कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण निगमका जहाज घाम ताप्ने निजीकाले व्यापार गर्ने मात्रै भएको देखिन्छ ।
उसै पनि निगमको हवाई टिकटका लागि माग बढ्दो थियो झनै दशैंको समयमा टिकट पाउन मुस्किल छ । जहाजको अभाव र यात्रुको माग बढेपछि निगमलाई हैरानी छ । निगमका जहाज चढ्न सर्वसाधरणले सक्दैनन्, मन्त्री, सांसद प्रहरीका ठूला मानिसले भनेपछि मात्रै टिकट मिल्ने एक सर्वसाधरणले गुनासो पोखे ।
निगमको टिकटका लागि निगमका उच्च अधिकारीलाई माथिल्लो स्तरबाट ठूलै दबाब खेप्नुपरेको छ । निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दशैंमा सर्वसाधरणले टिकट पाउँदैनन् पावरवालाले सोर्सफोर्स गरेर मात्रै जहाज चढ्ने अवसर पाउँछन् । हुन पनि पूर्वी पहाडी भेगका गन्तव्यमा पुग्ने एक दर्जनभन्दा बढी यात्रुले टिकटका लागि भोगेको याचनाको पीडा कम दर्दनाक छैन । निगमले जहाज नभएरै यात्रुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको हो । “आन्तरिक उडानमा हवाई यात्रुको माग बढी छ सोही अनुसार बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन किनकि निगमसँग जहाजै छैन,” निगमका एक निर्देशकले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय उडान र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्त सेवा (ग्राउन्डह्यान्डलिङ) बापतको भरमा निगमले जीविकोपार्जन गरिरहेको छ । निगमलाई धानेकै ग्राउन्डह्यान्डलिङ सेवाले हो ।
झण्डै ५० अर्ब आर्थिक ऋणभार बेहोरिरहेको निगमसँग अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुई थान न्यारो बडी ए ३२० र दुई थान वाइड बडी ए ३३० जहाज छन् । यी जहाज पनि कोभिड महामारीका कारण कतिपय गन्तव्यमा पुग्नसकेका छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान क्षेत्रमा निगमले करिब २० प्रतिशत व्यापार हिस्सा ओगटेको एक अधिकारीको भनाइ छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय उडानको भरमा मात्रै निगम चलेको छ । आन्तरिकमा मात्रै उपस्थिति रहेको छ ।
निजी एयरलाइन्सलाई यतिखेर यात्रुको माग धान्नै मुस्किल छ । दशैं तथा नजिकिएको तिहार र छठ पर्वले व्यापार मालामाल भइरहेको छ । ठूला एयरलाइन्सको दशैंका लागि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बुकिङ छ । दशैंका लागि केही उडान सङ्ख्या थपिने बुद्ध, यती र सौर्य एयरलाइन्सले जनाएका छन् ।
शरद ऋतुको सफा मौसममा हिमाल डाँडापखेराको दृश्यावलोकन गर्दै सहज र सुलभ यात्राका लागि यात्रुहरु पनि लालाहित छन् । आन्तरिक उडानका ठूला वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सौर्य एयर, गुण एयरलाइन्स लगायतले दशैं बिजनेसका लागि साबिकको उडान सङ्ख्या बढाएर यात्रुको मागअनुरुप सेवा दिइरहेका छन् ।
« महिलामैत्री छैनन् चाडपर्व, खोइ स्वतन्त्रता ?
१७ माइक्रोफाइनान्सको लाभांश घोषणा, कुनको कति ? »